Ny maherifon'ity raim-pianakaviana ity dia nalaina tamin'ny sarin'ny zanany | Famoronana an-tserasera
Thomas Romain no raim-pianakaviana afaka niova ny saripika nosoratan'ny zanakao ho lasa fanoharana tena manan-tantara. Ary na dia miteny aza isika hoe "scribbling", ny marina fa ny hevitry ny kely indrindra amin'ny trano dia mahatalanjona fotsiny.
Ny olon-dehibe mampianatra ny tanora, toa ny nitranga tamin'ity astronoma lehibe ity ary io lamba firakotra manokana io. Zavatra mitovy amin'i Romain ary ny zanany lahy sy ireo tarehin-tsoratra ireo mahavariana tokoa ka mahavita mamorona sain-tsaina sy faharanitan-jaza kely toy izany.
Saika afaka niantso ireo izahay sary nosoratana ho foto-kevitra sy hevitra ho an'ny raim-pianakaviana handray pensilihazo eny an-tànany ary hanomboka hanome azy endrika olon-dehibe kokoa ary efa mahazatra antsika amin'ireo maherifo ireo; mamela rohy mankamin'ny fanomezam-boninahitra natao indray izahay amin'ny iray amin'ireo ray aman-dreny amin'ity miralenta ity.
Araka ny asehon'ny ray, manahirana ny manao sary ary mila taona maro ny fampiharana azy mba hanana sehatra teknika tsara. Azontsika atao ny miresaka momba ny fomba fijery, ny famoronana, ny hazavana ary ny lafiny maro hafa izay tsy maintsy fehezina mba hahaleo tena tanteraka amin'ny sary.
Izay hisy tetika foana, toa raiso ny hevitry ny zanakao ary avadiho ho superheroes izy ireo, saingy mila ezaka sy fahaizana kely ary talenta kely foana izany.
Araka ny nambarany dia misy lalàna vitsivitsy. Ireo no manolotra ny lohahevitra raha tsy hoe manana aingam-panahy intsony izy ireo. Tena ilaina koa ny loko ary tsy maintsy miloko ireo sarisarinareo ireo. Ampahan'ny asanao io. Tahaka ilay raim-pianakaviana dia manapa-kevitra foana izy hoe iza amin'ireo sary hataony no hanovàny amin'ny haavo avo momba ny sary.
Avelanay ianao ny instagram for azonao atao ny manaraka ny dian'ity raim-pianakaviana ity sy ny sary ny zanakao dia niova ho karazan-tsarimihetsika mihetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Rehefa manova ny sary an-tsoratra nosoratan'ny zanany ho fanoharana ny raim-pianakaviana
Veronica dia hoy izy:
Mahafinaritra. Ao amin'ny fanoharana faharoa, ary ny fieritreretana ny Isaia 45 6-7 dia afaka mahatsapa fa ny zaza tsy mbola (ka) indoktrinina dia afaka mahatsapa ny tena toetoetran'ny "andriamanitra".
Valiny tamin'i Veronica
Nestor Cano dia hoy izy:
Mazava ho azy fa tena tsara ny fandikàn'ny olon-dehibe ny fanoharana ataon'ny zanakao. Fampivoarana "tena misy" kokoa ao anatin'ny tontolon'ny majika, mazava ho azy. Na izany aza, mifikitra amin'ireo tena izy aho, amiko dia manome fahalalahana bebe kokoa amin'ny fandikana izany. Hanohizana ny fanaovana sary roa, izay mahafinaritra! Miarahaba.
Valiny tamin'i Néstor Cano
Tsy maintsy ho hitantsika ny fomba hanintonan'izy ireo sary rehefa lehibe izy ireo. Tena nandalo an-drainy tokoa izy ireo!
Makà sary masina krismasy animated maimaim-poana an'i Adobe amin'ny SVG sy PNG